Rikoooo.com - FSX addon hevitra
FSX addon hevitra
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by NitroUK » 09 feb 2018, 11:40
Manontany tena aho raha misy olona mahalala an addon izany dia hanome fiantraikany fanilo amin'ny mpitsikilo ny totozy amiko ka rehefa ora ny alina ary ny fiaramanidina fiaramanidina dia Cold sy Dark aho mahita ireo switch dia mila mihodina mba hampandeha / hamiratra ny fiaramanidina ...
Misy zavatra tahaka izany ve amin'izao fotoana izao? mety ho angaha vita ve ny olona? id am-pifaliana no mandoa ny addon.
Mirary fatratra Glenn - G-VODC
My Payware Aircraft: majestic Dash 8 Q400, Flight1 BN-2 Islander, JustFlight 747 200/300 Series, RealAir Lancair lova
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 13 feb 2018, 01:25
Eh, tsy hanoro izany aho satria raha mipetraka io, ny mpitsikilo ny totozy dia hiankohin'ny FPS fotsiny, ary ny fampidirana ny endri-javatra toa izany dia hanimba bebe kokoa amin'ny fomba toy izany. Ny tsara indrindra dia ny fampiasana jiro tondra-drano mandritra ny fanomanana sidina Hamarino fa hampiasaina ianao APU (Aux Power Unit) ho an'ny fiaramanidina izay tena ilaina.